ကွကျဥကို တနေ့ ၂ လုံး စားပေးရငျ ခန်ဓာကိုယျမှာ ဘာတှပွေောငျးလဲလာမလဲ ?
HomeKnowledgeကွကျဥကို တနေ့ ၂ လုံး စားပေးရငျ ခန်ဓာကိုယျမှာ ဘာတှပွေောငျးလဲလာမလဲ ?
ကွကျဥက ကနျြးမာရေးအတှကျ အမြားကွီး အထောကျအကူ ဖွဈစပေါတယျ။ တခြို့တှကေ ကွကျဥရဲ့ ဆိုးကြိုးတှကေို ပွောကွပမေယျ့ ကွကျဥရဲ့ ဂုဏျသတ်တိကတော့ မနညျးပါဘူး။
၁။ ဦးနှောကျဆဲလျတှကေို အာဟာရ ဖွညျ့ပေးတယျ။
ဦးနှောကျအတှကျ choline ဆိုတဲ့ ဗီတာမငျက အရေးကွီးဆုံးပါ။ တဈနကေို့ ကွကျဥနှဈလုံးစားရငျ ဦးနှောကျအတှကျ လိုအပျတဲ့ အာဟာရကို ရရှိမှာပါ။ Choline ဓာတျ လြော့နညျးလာရငျ ဦးနှောကျက မတေ့တျလာပါတယျ။
ကွကျဥက အမွငျအာရုံကို ကွညျလငျစပေါတယျ။ မကျြလုံးမှာ Lutein ဓာတျခြို့တဲ့ရငျ ပကျြစီးသှားတဲ့ မကျြလုံးတဈရှူးတှေ စုဝေးလာပါလိမျ့မယျ။ အမွငျအာရုံလညျး ခြှတျယှငျးလာ ပါလိမျ့မယျ။
၃။ ကွကျဥမှာပါဝငျတဲ့ ဗီတာမငျ D က Calcium ဓာတျကို စုပျယူပေးတယျ။
ကွကျဥပွုတျကို တဈနတေ့ဈလုံးစားရငျ ဒါမှမဟုတျ ငါးကွီးဆီကို တဈနတေ့ဈဇှနျးသောကျရငျ ဗီတာမငျ D ဓာတျကိုရရှိမှာပါ။ ကွကျဥမှာပါဝငျတဲ့ ဗီတာမငျ D က အရိုးနဲ့သှားတှကေို ခိုငျမာစတေဲ့ calcium ထုံးဓာတျကို စုပျယူပေးပါတယျ။
၄။ ဗီတာမငျ B က အသားအရေ၊ ဆံပငျနဲ့ အသညျးကို ကာကှယျပေးတယျ။
ကွကျဥမှာပါဝငျတဲ့ Vitam B12 နဲ့ အစာခဖြေကျြပေးတဲ့ အာဟာရ ပရိုတိနျးတှကေ ဆံပငျနဲ့အသားအရကေို အကြိုးပွုပါတယျ။ ပွီးတော့ ကွကျဥက အသညျးမှာရှိတဲ့ အဆိပျအတောကျတှကေို ဖယျထုတျပေးပါတယျ။
၅။ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါ ဖွဈနိုငျခြေ လြော့နညျးစတေယျ။
ကွကျဥမှာပါဝငျတဲ့ ကိုလကျစထရောက ကနျြးမာရေးအတှကျ အန်တရာယျ မရှိပါဘူး။ ကွကျဥမှာ အိုမီဂါ3ပါဝငျတာကွောငျ့ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါ ဖွဈနိုငျခကြေို လြော့နညျးစပေါတယျ။
ကိုယျအလေးခြိနျကဖြို့ဆိုရငျ ကယျလိုရီနညျးတဲ့ ကွကျဥကို စားပေးသငျ့ ပါတယျ။ ကွကျဥကို မနကျစာအဖွဈစားရငျ ကိုယျအလေးခြိနျကတြာ နှဈဆမွနျမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ မနကျတိုငျးစားသှားရငျ တဈနတေ့ာအတှကျစားမိတဲ့ ကယျလိုရီတှကေို ကစြမှောပါ။
၇။ ကငျဆာရောဂါဖွဈနိုငျခကြေို လြော့နညျးစတေယျ။
ဦးနှောကျအတှကျ မရှိမဖွဈ လိုအပျတဲ့ Choline လို့ ချေါတဲ့ ဗီတာမငျက ကငျဆာဖွဈနိုငျခကြေိုလညျး လြော့နညျးစပေါတယျ။ အရှယျရောကျပွီးသား အမြိုးသမီး တဈယောကျဟာ ကွကျဥကို နတေို့ငျးစားပေးရငျ ရငျသားကငျဆာဖွဈနိုငျခြေ ၁၈% လြော့နညျးစမှောပါ။
၈။ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှအေတှကျ အားရှိစတေယျ။
ကွကျဥမှာဗီတာမငျ B9 ပါဝငျပါတယျ။ ဗီတာမငျ B9 က သှေးနီဥဆဲလျတှနေဲ့ သန်ဓသေားလောငျးတှကေ ဗီတာမငျ B9 ရဲ့ အကူအညီနဲ့ဖွဈပျေါပွီး သန်ဓသေားဖှံ့ဖွိုးမှု နှောငျ့နှေးခွငျးကို ဟနျ့တားပေးပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှေ အတှကျ ဗီတာမငျ B9 လိုအပျပါတယျ။ ကွကျဥတဈလုံးမှာ ဗီတာမငျ7မိုကျခရိုဂရမျ ပါဝငျပါတယျ။
၉။ အသကျအရှယျ အိုမငျးလာမှုကို နှေးစတေယျ။
ကွကျဥကို နတေို့ငျးစားပေးမယျဆိုရငျ ၃၅ နှဈကနေ ၄၀ အရှယျ ၈၇% အမြိုးသမီးတှမှော အသကျကွီးလာလို့ဖွဈတဲ့ အစကျအပွောကျတှေ ကငျးစပေါတယျ။ အမြိုးသားတှမှော ဆိုရငျ မကျြလုံးနားက အရေးအကွောငျးတှကေ သိသိသာသာ လြော့နညျးသှားမှာပါ။
ကြက်ဥကို တနေ့ ၂ လုံး စားပေးရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေပြောင်းလဲလာမလဲ ?
ကြက်ဥက ကျန်းမာရေးအတွက် အများကြီး အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ တချို့တွေက ကြက်ဥရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ပြောကြပေမယ့် ကြက်ဥရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိကတော့ မနည်းပါဘူး။
၁။ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကို အာဟာရ ဖြည့်ပေးတယ်။
ဦးနှောက်အတွက် choline ဆိုတဲ့ ဗီတာမင်က အရေးကြီးဆုံးပါ။ တစ်နေ့ကို ကြက်ဥနှစ်လုံးစားရင် ဦးနှောက်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရကို ရရှိမှာပါ။ Choline ဓာတ် လျော့နည်းလာရင် ဦးနှောက်က မေ့တတ်လာပါတယ်။
ကြက်ဥက အမြင်အာရုံကို ကြည်လင်စေပါတယ်။ မျက်လုံးမှာ Lutein ဓာတ်ချို့တဲ့ရင် ပျက်စီးသွားတဲ့ မျက်လုံးတစ်ရှူးတွေ စုဝေးလာပါလိမ့်မယ်။ အမြင်အာရုံလည်း ချွတ်ယွင်းလာ ပါလိမ့်မယ်။
၃။ ကြက်ဥမှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင် D က Calcium ဓာတ်ကို စုပ်ယူပေးတယ်။
ကြက်ဥပြုတ်ကို တစ်နေ့တစ်လုံးစားရင် ဒါမှမဟုတ် ငါးကြီးဆီကို တစ်နေ့တစ်ဇွန်းသောက်ရင် ဗီတာမင် D ဓာတ်ကိုရရှိမှာပါ။ ကြက်ဥမှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင် D က အရိုးနဲ့သွားတွေကို ခိုင်မာစေတဲ့ calcium ထုံးဓာတ်ကို စုပ်ယူပေးပါတယ်။
၄။ ဗီတာမင် B က အသားအရေ၊ ဆံပင်နဲ့ အသည်းကို ကာကွယ်ပေးတယ်။
ကြက်ဥမှာပါဝင်တဲ့ Vitam B12 နဲ့ အစာချေဖျက်ပေးတဲ့ အာဟာရ ပရိုတိန်းတွေက ဆံပင်နဲ့အသားအရေကို အကျိုးပြုပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြက်ဥက အသည်းမှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ထုတ်ပေးပါတယ်။
၅။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေ လျော့နည်းစေတယ်။
ကြက်ဥမှာပါဝင်တဲ့ ကိုလက်စထရောက ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ် မရှိပါဘူး။ ကြက်ဥမှာ အိုမီဂါ3ပါဝင်တာကြောင့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ဆိုရင် ကယ်လိုရီနည်းတဲ့ ကြက်ဥကို စားပေးသင့် ပါတယ်။ ကြက်ဥကို မနက်စာအဖြစ်စားရင် ကိုယ်အလေးချိန်ကျတာ နှစ်ဆမြန်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် မနက်တိုင်းစားသွားရင် တစ်နေ့တာအတွက်စားမိတဲ့ ကယ်လိုရီတွေကို ကျစေမှာပါ။
၇။ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို လျော့နည်းစေတယ်။
ဦးနှောက်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ Choline လို့ ခေါ်တဲ့ ဗီတာမင်က ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေကိုလည်း လျော့နည်းစေပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသား အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဟာ ကြက်ဥကို နေ့တိုင်းစားပေးရင် ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ ၁၈% လျော့နည်းစေမှာပါ။
၈။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအတွက် အားရှိစေတယ်။
ကြက်ဥမှာဗီတာမင် B9 ပါဝင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် B9 က သွေးနီဥဆဲလ်တွေနဲ့ သန္ဓေသားလောင်းတွေက ဗီတာမင် B9 ရဲ့ အကူအညီနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီး သန္ဓေသားဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်းကို ဟန့်တားပေးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ အတွက် ဗီတာမင် B9 လိုအပ်ပါတယ်။ ကြက်ဥတစ်လုံးမှာ ဗီတာမင်7မိုက်ခရိုဂရမ် ပါဝင်ပါတယ်။
၉။ အသက်အရွယ် အိုမင်းလာမှုကို နှေးစေတယ်။
ကြက်ဥကို နေ့တိုင်းစားပေးမယ်ဆိုရင် ၃၅ နှစ်ကနေ ၄၀ အရွယ် ၈၇% အမျိုးသမီးတွေမှာ အသက်ကြီးလာလို့ဖြစ်တဲ့ အစက်အပြောက်တွေ ကင်းစေပါတယ်။ အမျိုးသားတွေမှာ ဆိုရင် မျက်လုံးနားက အရေးအကြောင်းတွေက သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားမှာပါ။